Iindaba - Iikomityi zeplastiki zePET kunye neebhotile
Zenziwa njani izinto zePET?
Inxalenye encinci yeoyile yomhlaba isetyenziselwa ukwenza iikomityi zeplastiki kunye neebhotile zePET.
I-4% yeoyile yehlabathi isetyenziselwa ukwenza yonke iplastiki
Kule nto yokupakisha, yi-1.2% kuphela yeeplastiki ezisetyenziselwa ukwenza i-PET yeeplastiki zeziselo kunye neebhotile
Ishishini, ngokuhambelana noxanduva lwalo lokusingqongileyo, lihlala lijonga iindlela zokunciphisa ngakumbi inani lamanzi eliwasebenzisayo kwiinkqubo zalo zokuvelisa.
I-COPAK's PET CUPS yenziwe ngezinto zemvelaphi zePET. Zicocekile ngekristale kwaye zinokubonisa imeko yotywala bakho ngokucacileyo. Oku kuyakubamba abathengi kwaye kukhuthaze iziqhamo zakho. Kodwa ngoku ukukhuselwa kwendalo kuya kusiba ngakumbi kwaye kubaluleke ngakumbi, ke siphuhlise iikomityi zePLA. Iikomityi ze-PLA zinokutsha kwaye zinokuchumeka. Kodwa ixabiso liphezulu kakhulu kwaye umthamo wemveliso awukho mkhulu kangako. Kungenxa yokungabikho kwezinto eziphathekayo ngaphandle kwayo yonke iChina. Nangona kunjalo, ukuba ufuna iikomityi ze-PLA nathi sinokucaphula kuwe, ixesha lokuhambisa nje mhlawumbi lithile ixesha elide.
Abanye abathengi bafuna ukwazi ukuba yenziwe njani indebe ye-PET kwisanti ye-PET. Le nkqubo ilandelayo ingasombulula ingxaki yakho.
Ngaphambi ko-2020, abathengi abaninzi batyelela umzi-mveliso wethu wokuvelisa indebe ye-PET kunye nomzi-mveliso weebhotile zokuvelisa. Umatshini wemveliso ozenzekelayo oqhubela phambili kunye nendawo yethu yokusebenzela ecocekileyo zonke ziyahlangabezana nokulindela kwabathengi bethu. Yonke inkqubo yemveliso ihlangabezana nomgangatho wokutya kwaye sidlulile kwizatifikethi ze-BRC, i-ISO, i-FDA, i-SGS. Sonke siyazi ukuba kwi-2020, i-convid 19 yaqhuma kwaye uninzi lweentengiso zorhwebo zamanye amazwe ziyamiswa. Abathengi bamanye amazwe abanakho ukusindwendwela ngoku. Kodwa ungakhathazeki, sinesiqinisekiso somgangatho. Iividiyo kunye neefoto kufuneka ziboniswe, Siya kuthumela iimveliso ezintsha kuwe kwi-oda yakho elandelayo.
E-china, yonke into ibuyele kumkhondo oqhelekileyo ngoku. Amandla ethu emveliso yeekomityi zePET kunye neebhotile zePET ziye zafana nasekuqaleni. Ixesha lokuhambisa linokuqinisekiswa. Wamkele nawuphi na umbuzo omtsha kwiCOPAK.